Koox burcadda internet-ka ah oo qaab la yaab leh lacag ugu deeqa hay`adaha gargaarka | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Koox burcadda internet-ka ah oo qaab la yaab leh lacag ugu deeqa...
Koox burcadda internet-ka ah oo qaab la yaab leh lacag ugu deeqa hay`adaha gargaarka
Koox burcad internet-ka ah ayaa lacag la soo xaday ugu deeqaya hay`adaha gargaarka, arrintan oo loo arkay mid ka mid ah dembiyaha ugu xun ee barta internet-ka laga geysto. Kooxda Darkside ayaa sheegatay in malaayiin dollar ay ka dhaceen shirkado, balse waxay xuseen inay haatan doonayaan “inay dunida ka dhigaan meel ku habboon in lagu noolaado”.
Qoraal ay soo dhigeen bartooda internet-ka ayay ku soo bandhigeen risiid $10,000 oo loogu deeqay labo hay`ad oo gargaar. Hay`adahaas waxaa ka mid ah Children International, oo sheegtay inaysan qaadan doonin lacagtaas. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid la yaab leh.
Qoraal ay soo dhigeen bartooda 13-kii October, ayay burcaddan ku sheegeen inay keliya bartilmaameedsan doonaan hay`adaha waaweyn.
Waxay gacanta ku dhigaan o ay afduubtaan hannaanka teknolojiyadeed ee shirkadda ilaa madax furasho laga siiyo.
Brett Callow, oo falanqeeya howlgallada burcadda internet-ka kana tirsan shirkadda Emsisoft, ayaa sheegay inaysan caddeyn hadafka dembiilayaasha. Wuxuu sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee uu arko koox burcad internet-ka ah oo ficilkan oo kale sameynaya.
Burcadda Darkside ayaa ku cusub saaxadda, balse waxaa muuqata inay lacag ka dhacayaan shirkadaha. Waxaa sidoo kale caddeyn loo helay inay xiriir la leeyihiin kooxo kale oo burcadda internetka ah.
Dhanka kale waxaa walaac laga muujinayaa qaabka ay burcaddani lacagaha ugu deeqaan hay`adaha.
Waxay burcaddan adeegsadaan hannaan ka jira Mareykanka oo lagu magacaabo Giving Block, oo ay isticmaalaan in ka badan 67 hay`ado aan faa`iido doon ahayn oo dunida daafaheeda ka jira, waxaa ka mid ah Save The Children, Rainforest Foundation iyo She’s The First.
Previous articleSidee baraha bulshada Kenya looga hadal hayaa wasiirrada cusub ee Soomaaliya?
Next articleDaawo Sawirada: Madaxtooyada cusub ee loo dhisayo Galmudug iyo Qoor Qoor oo kormeeray
Guddiga Puntland u xilsaartay saameynta duufaantii GATI oo warbixin gudbiyay & Halis laga digay…….
BIG NEWS:Afhayeenka Tigrayga oo ka hadlay qorshaha R/W Abiy Ahmed ka wado Somalia
Imaaraadka oo Somaliland ka fulinaya waddo tareen iyo 15,000 oo askari oo loo…
Puntland: Dableey Shabaab ah iyo Amiirkooda oo la qabtay
Axmed Madoobe oo dacwad ka dhan ah Farmaajo & Kheyre u gudbiyay Beesha caalamka
DHAGEYSO: Maal-qabeenka Bill Gates oo tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya
DAAWO:Hadalkii hanjabaada ahaa ee Kenya usoo dirtay Soomaaliya caawa fiidkii iyo wasiirada oo sheegtay…